Romafo 6 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
6 Enti dɛn na yɛnka? Yɛntena bɔne mu, na adom adɔɔso anaa?+ 2 Dabida! Sɛ yɛawu ama bɔne+ a, ɛbɛyɛ dɛn na yɛakɔ so atena ase wɔ mu?+ 3 Anaasɛ munnim sɛ yɛn a wɔbɔɔ yɛn asu kɔɔ Kristo Yesu mu+ no nyinaa, wɔbɔɔ yɛn asu kɔɔ ne wu mu?+ 4 Enti wɔnam asu a wɔbɔɔ yɛn kɔɔ ne wu mu no so siee+ yɛne no, na sɛnea wɔnam Agya no anuonyam so nyan Kristo fii awufo mu+ no, yɛn nso yɛanantew asetena foforo mu+ saa ara. 5 Na sɛ yɛne no ayɛ biako wɔ ɔkwan a ɔfaa so wui+ mu a, ɛnde ɔkwan biara so yɛne no bɛyɛ biako wɔ ne nyan nso mu;+ 6 efisɛ yenim sɛ wɔde yɛn nipasu dedaw no aka ne ho abɔ asɛndua mu,+ sɛnea ɛbɛyɛ a yɛn nipadua a bɔne aka no no ntumi nyɛ adwuma,+ na yɛankɔ so anyɛ bɔne nkoa+ bio. 7 Efisɛ nea wawu no, wɔabu no bem afi ne bɔne ho.+ 8 Afei nso, sɛ yɛne Kristo awu a, yegye di sɛ yɛne no bɛtena ase+ nso. 9 Na yenim sɛ seesei a wɔanyan Kristo afi awufo mu+ no, ɔrenwu bio;+ owu nni ne so tumi bio. 10 Na wu a owui no, owu maa bɔne prɛko;+ nanso ase a ɔte no de, ɔte ma Onyankopɔn.+ 11 Saa ara na mo nso: mummu mo ho sɛ moawu+ ama bɔne, na mote ase+ ma Onyankopɔn wɔ Kristo Yesu mu. 12 Enti mommma bɔne nnkɔ so nnni hene+ wɔ mo nipadua a ebewu no so, na munntie n’akɔnnɔ.+ 13 Saa ara nso na ɛnsɛ sɛ mode mo akwaa ma bɔne+ sɛ amumɔyɛ akode,+ na mmom momfa mo ho mma Onyankopɔn sɛ wɔn a wɔanyan+ afi awufo mu, na momfa mo akwaa mma Onyankopɔn sɛ trenee akode.+ 14 Na ɛnsɛ sɛ bɔne nya mo so tumi, efisɛ munni mmara ase,+ na mmom adom ase.+ 15 Afei dɛn? Esiane sɛ yenni mmara+ ase na mmom yɛwɔ adom+ ase nti yɛnyɛ bɔne anaa? Dabida! 16 Munnim sɛ obiara a mode mo ho ma no sɛ nkoa na mutie no no, tie a mutie no nti ɔno na moyɛ ne nkoa,+ sɛ́ ɛyɛ bɔne+ a ɛkɔ owu mu+ anaa osetie+ a ɛkɔ trenee mu+ no? 17 Nanso aseda nka Onyankopɔn sɛ na moyɛ bɔne nkoa, na afei de mufi koma mu ayɛ osetie ama nkyerɛkyerɛ a wɔde mo ahyɛ ase+ no. 18 Yiw, esiane sɛ wɔma modee mo ho+ fii bɔne ho nti, mobɛyɛɛ trenee+ nkoa.+ 19 Esiane mo honam+ a ɛyɛ mmerɛw nti, mede nnipa kasa na ɛrekasa kyerɛ mo: na sɛnea mode mo akwaa+ yɛɛ nkoa maa efĩ+ ne mmaratode de kɔɔ mmaratode mu no, saa ara na afei momfa mo akwaa nyɛ nkoa mma trenee nkɔ ahotew mu.+ 20 Efisɛ bere a na moyɛ bɔne nkoa+ no, na moade mo ho afi trenee ho. 21 Ɛnde aba+ bɛn na na mowɔ saa bere no? Nneɛma+ a seesei ɛyɛ mo aniwu. Na saa nneɛma no awiei yɛ owu.+ 22 Nanso afei, esiane sɛ wɔma modee mo ho fii bɔne ho na mobɛyɛɛ Onyankopɔn nkoa+ nti, moresow aba+ wɔ kronkronyɛ kwan so, na n’awiei yɛ daa nkwa.+ 23 Efisɛ bɔne akatua ne owu,+ na akyɛde+ a Onyankopɔn de ma ne daa nkwa+ a ɛnam yɛn Awurade Kristo Yesu so.+